Barcelona Oo Khasaarisay Kala-badh Rikoodheyaashii Xilli Ciyaareedkan Ay Heshay | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaBarcelona Oo Khasaarisay Kala-badh Rikoodheyaashii Xilli Ciyaareedkan Ay Heshay
Barcelona Oo Khasaarisay Kala-badh Rikoodheyaashii Xilli Ciyaareedkan Ay Heshay
Rikoodhihii uu Lionel Messi khasaariyey kulankii PSG ee xalay, waxa uu sii kordhiyey tirada gool ku laadka Barcelona ay xilli ciyaareedkan ku guul-darraysatay inay goolal u beddesho.
Kooxda reer Spain oo lagu yaqaano inay haysato ciyaartoyda ugu khabiirsan dhinaca rikoodheyaasha, gaar ahaanna Real Madrid oo takhasus ku ah laadka noocan ah oo inta badan uu goolal u beddelo ayaa waxa uu isaguna raacay xiddigaha kooxdiisa ee xilli ciyaareedkan lumiyey fursadaha aan looga barinanin.
Lionel Messi ayaa rikoodhihii uu xalay khasaariyey waxa uu u ahaa midkii ugu horreeyey ee Champions League ah ee uu lumiyo tan iyo sannadkii 2015kii, markaas oo sidan oo kale uu u awoodi waayey inuu ka dhaliyo Manchester City.
Barcelona ayaa xilli ciyaareedkan heshay 15 rikoodhe oo dhamaan tartamada ah, waxaase ay khasaariyeen lix ka mid ah, taas oo marka loo beddelo boqolay noqonaysa ku dhowaad 40 boqolkiiba.
Saddexda tartan ee LaLiga Santander, Copa del Rey iyo Champions League ayaa intaba ay ka heleen rikoodheyaal, waxaana dhibaatadooda rikoodhe laadistu ay sii socotay Arbacadii xalay oo Lionel Messi uu noqday ciyaartoygii ugu dambeeyey ee ka lumiyey rikoodhaha.
Lionel Messi ayaa dhaliyey shan rikoodhe intii uu socday tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan, waxaanu kasoo bilaabay Ferencvaros, Juventus, Dynamo Kiev iyo Paris Saint-Germain oo lugtii hore ee Camp Nou uu ka dhaliyey. Martin Braithwaite iyo Ousmane Dembele ayaa sidoo kale rikoodheyaal u dhaliyey xilli ciyaareedkan.
Sikastaba, horyaalka ayay dhibaatada ugu badan ka haysatay oo ay ku adkaatay in rikoodheyaashii loo dhigay ay dhaliyaan. Lix rikoodhe oo horyaalka ah ayay saddexna dhaliyeen, saddexna khasaariyeen.
Martin Braithwaite ayaa rikoodhe lumiyey ciyaartii Eibar, sidoo kalena Lionel Messi ayaa sidii xalay oo kale ay ku dhacday kulan ay kooxdiisu la ciyaartay Valencia iyo Antoine Griezmann oo ku biiray liiska dhibbaneyaasha gool ku laadka kulankii Real Betis.
Rikoodhkooda ugu liita ayaa kaga yimid tartanka Copa del Rey oo laba rikoodhe oo loo dhigay ay labadiiba khasaariyeen, waxaana fursadahan beer darreeyey Ousmane Dembele iyo Miralem Pjanic.